Lahatsoratra nataon'i Jilian Woods momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Jilian Woods
Jilian Woods dia mpanao gazety tsy miankina ary mpanoratra mandray anjara manana traikefa an-tsoratra mihoatra ny roa taona. Amin'ny maha mpanoratra azy dia hitany ny tanjony amin'ny famokarana sy fizarana atiny mifandraika amin'ireo olona maniry hianatra zava-baovao. Ankoatra ny asany amin'ny androny, mety ho hitanao fa milatsaka an-tsitrapo na manao yoga i Jilian.
Ahoana ny fampiasana ny data ho an'ny mpividy amin'ny alàlan'ny tetikady ara-barotra amin'ny taona 2019
Zoma, Febroary 1, 2019 Alahady 3 Febroary 2019 Jilian Woods
Toa tsy mampino fa, amin'ny taona 2019, orinasa maro kokoa no tsy mampiasa angon-drakitra fikasana hitarika ny hetsika fivarotana sy fivarotana azy ireo. Ny zava-misy izay vitsy dia vitsy no mihady izany lalina izany mba hahitana ny mety tsara indrindra dia mitarika anao sy ny orinasanao amin'ny tombony azo. Androany, te-hijery lafiny maro amin'ny angon-drakitra fikasana sy izay azony atao amin'ny paikady varotra sy marketing amin'ny ho avy izahay. Hodinihinay daholo ireo